Raysul waaaraha Soomaaliya oo maanta Kismaayo kula shiraya maamulka Juba iyo bulshada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo – Mareeg.com: Iyadoo shalay goor dambe wafdi uu hogaaminayo Raysulwasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed uu gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta halkaas ka furmaya wadahadal Raysulwasaaruhu la yeelnayo maamulka KMG ah ee Juba iyo bulshada Kismaayo.
Wasiirka aminga maamulka JUBA, Jen. Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay in laga wada hadli doono arrimaha amaanka, dastuurka iyo fedraalka.
Mar Jen. Darwiish la weydiiyey in laga wada hadlayo aarrimaha maamulka dekedda iyo garoonka Kismaayo, ayuu sheegay in arrimahaasi yihiin kuwa dastuuri ah, dhib weyna uusan ka taagneyn.
Waxaa sidoo kale, Jen. Darwiish wax laga weydiiyey amaan xumada ka jirta Kismaayo, wuxuuna diiday in amaanka Kismaayo liito, wuxuuna xusay in tan iyo markii la dhisay maamulka uu wasiirka ka yahay uu amaanku soo hagaayey, horumarinna ay magaalada ka wadaan.
Qaar ka mid ah bulshada degan Kismaayo ayaa dhibaato iyo xadgudubyo ka sheeganaya ciidamada maamulka KMG ah ee JUBA, sidoo kale waxaa banaanka magaalada jooga maleeshiyo uu hogaaminayo Col. Barre Hiiraale oo ka horjeedda maamulka.
Ciidamo xoojin ah oo Amisom u dirtay Bakool